फेसबुकका ६८ लाख प्रयोगकर्ताको नीजि तस्विर बिना जानकारी प्रकाशित, तपाईँको पनि पर्यो कि ? - Technology Khabar
» फेसबुकका ६८ लाख प्रयोगकर्ताको नीजि तस्विर बिना जानकारी प्रकाशित, तपाईँको पनि पर्यो कि ?
फेसबुकका ६८ लाख प्रयोगकर्ताको नीजि तस्विर बिना जानकारी प्रकाशित, तपाईँको पनि पर्यो कि ?
Technology Khabar २९ मंसिर २०७५, शनिबार
काठमाडौं । तपाई फेसबुकको नियमित यूजर हो भने तपाईँले अब आफ्नो एकाउन्ट सुरक्षामा गंभिर हुनुपर्ने भएको छ ।
हालै फेसबुकले यूजरको प्राइभेट फोटोहरु एक्सपोज भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ । फेसबुकले हालै एपहरुमार्फत विश्वभरका ६.८ मिलियन अर्थात ६८ लाख यूजरहरुको नीजि फोटोहरु सार्वजनिक भएको जानकारी दिएको हो ।
यी एपहरुले यूजर्सको फोटो हेर्नका लागि सिमित एक्सेस मात्र पाएका थिए, तर सो एपहरुमा भएको बगका कारण एपद्धारा प्रयोगकर्ताहरुको गोप्य फोटोहरुमा पनि पहुँच पाएका थिए ।
यस्तो फोटो एक्सपोज हुनेमा त्यस्ता फोटोहरु छन जून फेसबुकमा अपलोड गरिएको तर पोष्ट नगरिएको र यूजर्सको स्टोरीजमा राखिएका फोटोहरु छन् । मेसेन्जरमा पठाईएका फोटोहरुमा भने त्यस्तो पहुँच नपाएको र सुरक्षित भएको बताईएको छ ।
फेसबुककाअनुसार यी फोटोहरु सेप्टेम्बर १३ देखि सेप्टेम्बर २५ तारिखको बीचमा एक्सपोज भएको थियो । फेसबुकले सो घटना सेप्टेम्बर २५ मा थाहा पाएको थियो, तर अहिलेसम्म सो घटना किन कम्पनीले लुकायो भन्ने स्पष्ट छैन् । तर कम्पनीले युरोपियन यूनियनको प्राइभेसी वाचडगको रुपमा काम गर्ने दि अफिस अफ दिन डेटा प्रोटेक्सन कमिस्नरलाई जानकारी दिएको थियो ।
हालको नीजि तस्विरहरु सार्वजनिकबाट प्रभावितहरुलाई फेसबुकले अलर्ट नोटिफिकेसन पठाउने उल्लेख गरेको छ । यदि तपाईँको एकाउन्टमा पनि फेसबुकको नोटिफिकेसन आएको छ भने सो नोटिफिकेसनको आधारमा आफ्नो एकाउन्टलाई थप सुरक्षित पार्नुहोस् ।
डेभलपरहरुसम्म पुगेको तर एपद्धारा अनधिकृतरुपमा पहुँच पाएको फोटोहरुको प्रतिलिपी डिलिट गर्नको लागि फेसबुकले डेभलपर्सहरुसँग काम गरिरहेको बताएको छ । सो घट्नामा ८७६ डेभलपरहरुको १,५०० एप्सले मानिसहरुको तस्विरहरुमा अनधिकृतरुपमा पहुँच पाएको थियो ।
फेसबुकले सो बग पत्ता लागेको र समस्या समाधान भईरहेको जानकारी दिएको छ ।
पछिल्ला दिनहरुमा फेसबुकबाट प्रयोगकर्ताहरुको गोप्य जानकारीहरु चोरी हुने वा फेसबुकले नै तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरेको घट्नाका कारण फेसबुक विबादमा पर्दै आएको छ ।
सूचना प्रविधिले सरकारी निकायका महशुल भुक्तानी सेवा सहज बनाउँदै
दैनिक आवश्यक सामाग्रीहरू वितरण गर्न अनलाइन प्लेटफर्म दराज र बिगमार्ट बिच साझेदारी
क्वालकमले स्वचालित गाडिहरुका लागि कम्प्यूटर सिस्टम बनाउने घोषणा
एप्पलका उत्पादनहरु अब अझ बढि सुरक्षित, इन्क्रिप्सन सेटिंगमा थप सुधार
प्रभु बैंकले ल्यायो क्युआर कोड स्क्यान गरी नगद झिक्न सक्ने सेवा
टेक कम्पनी एप्पलले मुख्यालयमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीलाई भन्यो- घरबाटै काम गर्नुस्
तपाईँको मोबाइलमा नागरिक एप चलेन् ? यसरी ल्याउनुस् आफ्नो नाममा टेलिकमको सिमकार्ड
‘अनलाइन फुड फेस्टिवल मार्फत फूड डेलिभरीको बजार बिस्तार र प्रबर्द्धन गर्दैछौं’
भिभो एक्स ६० प्रोप्लस ५जी जनवरी २१ मा सार्वजनिक हुँदै, यस्ता छन् फिचर
रेडमी के४० मा स्न्यापड्रागन ८८८ चिपसेट नराखिने, सस्तो मूल्यमा पावरफूल फोन ल्याउँदै